Xildhibaan Cabdi Cali oo ku-dhaliillay Guddoonka in ay ka gaabiyeen shaqooyinkooda iyo awoodooda – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdi Cali oo ka mid ah golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa guddoonka golaha shacabka ku dhaliilay in ay ka gaabiyeen shaqooyinkooda, gaar ahaan kor-meerka iyo kor-joogteynta mudanayaasha Baarlamaanka.
Xildhibaanka ayaa aaminsan in guddoonka aysan fahansaneyn in ay awood u leeyihiin kor-joogteynta xildhibaannada.
“Labada mar ee aad na kor-joogteyn kartaan ee aad awooda u leedihiin waa, marka aan kulanka fadhino oo ku saabsan kooramka oo ku saabsan maxaa laga yeelayaa haddii xildhibaannada ay imaan waayaan kulanka, midda labaad ayaa ah marka guddiyaddu ay shaqeynayaan”.
Labadaasi awoodood ma isticmaashaan taasina waxaa ay keentay in aad awoodiinii gabtaan, ayuu hadalkiisu sii raaciyay.
Kulanka golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa inta badan waxaana soo xaadirin dhammaan xildhibaannada, taas oo keenta su’aalo dhowr ah oo ku foorara guddoonka.
27-kii bishan Oct, Guddoomiyaha ayaa sheegay in mudanihii maqnaada maanta kaddib, in qoraal ay ka sameyn doonaan, Guddoomiyaha ayaa hadalkiisii sii raaciyay in ixtiraam badan ay sameeyeen, oo ay wax xun la aheyn in ay yiraahdaan Senator ayaa kullanka ka maqnaa maanta.
“Laakiin hadda kaddib, haddii ay joogto noqoto maqnaanshaha Senatarada, oo aan xil la isa-saarin waa arrin lagama-maar-maan ah in Senatarkii maqnaada warqad laga qoro. Markii hore waxaan ku shaqeyn jirnay mudanaha xilka gartay iyo kana an garan in duu-duub la isugu waddo”.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi, ayaa carabka ku adkeeyay in hal Senator uu shirka u baaqday, kaas oo ka dhinnaa tirada uu kooramka ku furmi lahaa.